Madio sy maina manadio vacuum, rivotra mitsoka - Jinqiu
Floor Machine (2)
Systerma madio fikojakojana vato
Agent Agent Polishing Grainte
Crystallizer poloney marbra
Ny vokatray dia raisin'ireo mpanjifanay amin'ny kalitao avo indrindra, ny vidin'ny fifaninanana ary ny fomba fampiasa indrindra.
Shijiazhuang Jinqiu Trading Co., Ltd. dia mpamatsy matihanina ny milina fanadiovana, fitaovana fanadiovana ary rafitra fikolokoloana vato. Azontsika atao ny manome scrubber, burnisher, vacuum cleaner, carpet cleaner, blower, wringer trolley, carts, marbra sy granite fikarakarana, polishing, fanamboarana ary fanadiovana vokatra.
Mpanjifa maro no manolotra rafitra fanadiovana vaovao ho an'ny tsena eo an-toerana amin'ny firenena samy hafa, ho an'ny mpanjifa samihafa dia afaka manome vahaolana maromaro arak'izay takianay izahay. Hatreto dia manondrana milina fanadiovana sy fitaovana fanadiovana any Azia atsimo atsinanana sy Eropa mihoatra ny 10 taona izahay.
Ny varotra Shijiazhuang Jinqiu dia hanohy hanome ny mpiara-miasa teknolojia mandroso antsika sy hanome fahafaham-po ny vokatra, hanamora ny fiainantsika sy ny asanay.
Kamiao mitongilana 350L / 450L –B-110A / B-110B
Crystallizer-poloney marbra-KLEEVER K2 / K3
Crystallizer poloney marbra MR5
34L / 46L Side press press trollley roa -H0201 0202
Matoky izahay fa hizara vokatra roa ary hanangana fifandraisana fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo namanay amin'ity tsena ity.
Mpamatsy sinoa sliding plastika avo lenta
Vahaolana granite miloko maivana
Granite miloko mavo sy harafesina miloko dia granite rehetra amin'ny firafitry ny lamela. Ho fanampin'ny fanamafisana ny rano granita kapila an'ny granite, noho ny loko fotsy dia misy toerana misy rano na loto, ary ny dian-drano dia tsy mora manjavona. Ao anatin'ny...
Maninona no misafidy milina fanosotra
Satria gorodona vita amin'ny marbra na seramika ny gorodon'ny toeram-pivarotana sy ny gara, ny karazan-tany toy izany dia manana takiana avo lenta amin'ny fahadiovana, manoloana izany, izy ireo dia maneho ny sarin'ny toerana ampahibemaso. Noho izany, ny asa fanadiovana dia tsy maintsy atao am-pitandremana. Tsikelikely, ...
Ny 20'FCL NCL Dingana iray Crystallizer sy Bellinwax dia tonga tahiry ho an'ny mpanjifa talohan'ny fialantsasatra Muharram Festival.
Laboratoara simika nasionaly araka ny fantatsika ny NCL, hatramin'ny fiandohan'ny faran'ny taona 1940 dia nanamboatra savony sy shampoos ho an'ny orinasan-tsarimihetsika fanatsarana tarehy ho an'ny fianakaviana, hatramin'ny anjara andraikitry ny mpitarika amin'ny sehatry ny fikojakojana ny fahadiovana amin'ny maha-mpanome marika feno sy manerantany. NCL ve izy ...
Ny vokatra tsirairay dia vita tsara, hanome fahafaham-po anao izany.
SC-1500 Burnisher haingam-pandeha
Machine fanavaozana ny gorodona SC-004
Masinina fanavaozana BD2AE-gorodona
Masinina fanavaozana ny gorodona BD1AE
Masinina borosy BD3A maro-miasa
Masinina fanasana borosy maro BD2A
Masinina fanasana borosy maro BD1A
Masinina gorodona misy fampiasa maro-SC002